သက်ဝေ: ကိုယ်ချစ်သော တိမ်
တိမ်တွေဟာ သိပ်လှတာပဲလို့ ကိုယ်ပြောရင်
Posted by သက်ဝေ at 6:20 PM
sonata-cantata January 2, 2010 at 7:57 PM
တိမ်တွေနဲ့ အလှချင်းပြိုင်ရကောင်းမလားလို့ ...
အောက်မကျခင် မနည်းလှမ်းထားဖမ်းလိုက်ရတယ်း))
Phyo Evergreen January 2, 2010 at 8:25 PM
ယုံပါတယ်.. တိမ်တွေသိပ်လှတယ်..။ အဲဒီစာကြောင်းလေး အမြဲရင်ထဲစွဲနေတယ်.. စာအုပ်ဖတ်ပြီးကတည်းက..။
ဝေလင်း January 2, 2010 at 8:36 PM
khet myint myint January 2, 2010 at 10:06 PM
နှစ်ကျပ်ခွဲတန် ရိုက်ချက်လားလို့ စေ့ငု သွားပါတယ်။
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ January 2, 2010 at 10:12 PM
pandora January 2, 2010 at 10:14 PM
Seeing is believing. :)
Hmoo January 2, 2010 at 10:16 PM
I always trust U....even u said...clouds in ur room :)
သင်းနွယ်ဇင် January 2, 2010 at 10:28 PM
PAUK January 3, 2010 at 1:49 AM
အခု ဒီတိမ်နဲ့ ဘယ်တိမ့်ကို ပိုချစ်သလဲ..။။
khin oo may January 3, 2010 at 2:17 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း January 3, 2010 at 5:19 AM
P.Ti January 3, 2010 at 11:32 AM
ကားမောင်းရင်း တိမ်မကြည့်ပါနဲ့ (သတိပေးစာတန်း ကပ်ထားပါ)
ချစ်ကြည်အေး January 3, 2010 at 12:20 PM
နှစ်ကျပ်ခွဲကြီး လက်ချက် ပေါ့လေ....:D
Craton January 3, 2010 at 6:27 PM
Taungoo January 3, 2010 at 10:16 PM
မှန်းကြည့်မယ် အမသက်ဝေ။ နှစ်ကျပ်မခွဲကတည်းက ဝယ်ပြီးသားများလား။ ဆက်ပစ်တော့မဲ့ ဒုံးကျည်တွေအတွက် ပစ်စင် အဖြစ် နှစ်ကျပ်ခွဲလိုက်တာထင်တယ်။ ၁၀ ရက်ပဲ ကွာတယ်။း)
ရွှေပြည်သူ January 3, 2010 at 11:10 PM
၂ ကျပ်ခွဲကြီး ဝယ်လိုက်ပြီထင်တယ် အစ်မး))
အဲဒီစာကြောင်းကို စိတ်ထဲက ရွတ်မိတိုင်း လွင့်မျောပြုတ်ကျနေတဲ့ တထိတ်ထိတ် ခံစားချက်နဲ့အတူ ဘာကိုမှန်းမသိ သဘောလည်း ကျမိတယ် အစ်မသက်ဝေရယ်...
mae January 4, 2010 at 3:46 AM
happy new year မမသက်ဝေ
Steve Evergreen January 4, 2010 at 6:43 AM
aiming high! cool
Anonymous January 5, 2010 at 3:03 PM
can be adjust the light of clouds in step father bed room :)
some anonymous need2take medications.
ကြည် January 6, 2010 at 12:40 AM
အော်.. သက်ဝေရဲ့ နှစ်ကျပ်ခွဲကြီးဆိုပြီး သတင်းကြီးနေပါပေါ့လား။ ပထမပုံတော့ တွေ့ရပြီ.. ဒုတိယပုံ..တတိယပုံများကိုလည်းမျော်နေပါသည်။
တန်ခူး January 6, 2010 at 10:20 PM
သက်ဝေရေ… ခုပဲ အိမ်က သက်ဝေဘော်ဒါကြီးက ဘေးကနေပြောနေတာ… သက်ဝေနှစ်ကျပ်ခွဲက အတော်ပေါက်သွားတယ်တဲ့… အားကျတယ်သက်ဝေရေ… တို့ အတွက်တော့ တိမ်တွေကို လှမ်းမျှော်ရုံကလွဲပြီး… အလှမ်းဝေးတဲ့တိမ်တွေကို အနီးလေးဖြစ်အောင် ဖန်ဆင်းပေးတဲ့သက်ဝေကို ကျေးဇူးပါ… ဒီက ၁ကျပ်ခွဲဘ၀ကို သက်ဝေနားလည်မှာပါနော်…
ချစ်ခြင်းနှင့် မျောလွင့် အတူ
ကိုယ့်ရဲ့ နေ့များ အကြောင်း
တိမ်အလိပ်လိပ် နှင့် ငွေအစိတ်